Zimbabwe opposition pledges upgraded ties with Israel if it takes power – Report Focus
HARARE, Zimbabwe — Zimbabwe’s main opposition party announced Thursday it will establish formal ties with Israel — a major foreign policy shift — and create a $100 billion economy within a decade if it wins July 30 elections.
Zimbabwe’s opposition leader Nelson Chamisa during the launch of the party’s election manifesto in Harare, June, 7, 2018. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Harare has never supported boycotts of Israel, though, and in 2001 it expressed support for the two-state solution. The countries have trade relations, with Israeli exports totaling more than $7 million in 2015, and Zimbabwe’s exports — almost exclusively diamonds — totaling $13.8 million.
Newly sworn in Zimbabwe’s president Emmerson Mnangagwa (C) walks after taking the oath of office at the national sports stadium on the outskirts of Harare, on November 24, 2017 during the Inauguration ceremony. (AFP PHOTO / Marco Longari)
ael & the RegionEmmerson MnangagwaIsrael-Zimbabwe relationsNelson Chamisarobert mugabezimbabwe